Iimfuno zobugcisa iindawo machining kunye namacandelo - Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co. LTD.
Inkqubo yokulungiswa kwamalungu yinkqubo yokutshintsha ngokuthe ngqo ukubonakala kwemathiriyeli ekrwada ukuyenza imveliso egqityiweyo okanye egqityiweyo. Le nkqubo ibizwa ngokuba yinkqubo yezobuchwepheshe. Luphawu lokulinganisa lokulungisa kunye nokuchaneka kokulungiswa kwamalungu. Inkqubo inzima ngakumbi.
Inkqubo yokumatshini yokulinganisa yezahlulo ezichanekileyo zohlulwahlulwa ngokwamacandelo ngokweenkqubo ezahlukeneyo: ukulahla, ukuqulunqa, ukunyathela, ukuwelda, unyango lobushushu, ukuhambisa, ukuhlanganisa, njl.njl. inkqubo. Ezinye njengokucoca, ukuhlolwa, ukugcinwa kwezixhobo, ukutywina ioyile, njl.njl. Indlela yokujika itshintsha iipropathi zomhlaba zempahla ekrwada okanye iimveliso ezigqityiweyo. Inkqubo machining CNC kolu shishino yinkqubo ephambili.
Ukulungiswa komda wamalungu
1. Ukunyamezelana kweemilo ezingaphawulwanga kufuneka kuhlangane neemfuno ze-GB1184-80.
2. Unxaxho oluvumelekileyo lobungakanani obungadweliswanga lobungakanani yi ± 0.5mm.
3. Akukho radius eyi-R5.
4. Onke amachaphaza angagcwaliswanga yi-C2.
5. I-engile ebukhali ifutshane.
6. Umphetho obukhali awunangqondo, kwaye i-burr kunye ne-flash ziyasuswa.
Unyango umphezulu iinxalenye
1. Akufanele kubekho ukukrwela, ukukrala kunye nezinye iziphene ezonakalisa umphezulu wenxalenye.
2. Umphezulu womsonto ogqityiweyo awuvumelekanga ukuba ube neziphene ezinje ngolusu olumnyama, amaqhuma, amaqhosha angahleliyo kunye neeburr. Ngaphambi kokupeyinta umphezulu wazo zonke izinto zentsimbi ekufuneka zipeyintiwe, irusi, isikali se-oxide, igrisi, uthuli, umhlaba, ityuwa kunye nokungcola kufuneka kususwe.
3. Phambi kokususwa kwerusi, sebenzisa isinyibilikisi se-organic, i-lye, i-emulsifier, umphunga, njl.
4. Ixesha lokuphumla phakathi komphezulu oza kugutyungelwa ngokudubula okanye ngokwenza ngesandla kunye nokwaleka kwasekuqaleni akufuneki kube ngaphezulu kwe-6h.
5. Imiphezulu yamalungu e-riveting enxibelelana enye nenye kufuneka ipeyintwe ngepeyinti yokulwa ne-rust enobunzima be-30-40Î¼m ngaphambi kokudibanisa. Imiphetho yamanqatha kufuneka itywinwe ngepeyinti, nge-putty okanye nge-adhesive. I-primer eyonakele ngokuqhubekeka okanye nge-welding kufuneka iphinde ipeyintwe.
Ukukhethwa kwezixhobo kufuneka kube kufanelekile kwaye kuchaneke. Ukurhabaxa kufuneka kwenziwe kwisixhobo somatshini wamandla aphezulu, kuba eyona njongo yayo kukusika uninzi lwesibonelelo semishini, kwaye iimfuno zokuchaneka aziphezulu kangako. Nangona kunjalo, ukulungiselela ukusebenza kakuhle, izixhobo zomatshini ezichanekileyo eziphezulu ziyafuneka ekusebenzeni. Ukhetho olufanelekileyo lwezixhobo zomatshini alunakuqinisekisa ngokuchaneka kokuqhubekeka, kodwa kukwandisa ubomi benkonzo kumatshini.
Inkqubo yokubekwa kolungelelwaniso lokulungiswa kwamacandelo oomatshini kubandakanya ukubekwa kweebhentshi, ezisetyenziswa yimixokelelwane okanye ukulungiswa xa kusenziwa umatshini kwi-lathe ye-CNC. Imilinganiselo yebhentshi, le benchmark ihlala ibhekisa kubungakanani okanye kwimigangatho yendawo ekufuneka igcinwe ngexesha lokuhlolwa. I-Assembly datum, le datum ihlala ibhekisa kumgangatho wobume beendawo ngexesha lenkqubo yendibano.
Ngaba ukuqhubekeka kwamalungu omatshini kufuneka wazi izinto